कलियुगका कुरा: हैन खाट जोडेरै मञ्च बनाउँछन् कि के हो ?
हैन खाट जोडेरै मञ्च बनाउँछन् कि के हो ?
उहिले गणेशमान सिंह भरतपुराँ लड्दा कुर्चीकान्ड भाको थियो। आज फेरि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल काठमाडौंको नयाँबजारस्थित पिपल्स डेन्टल अस्पतालको कार्यक्रममा मञ्चमा खुट्टा अड्केर घाइते भएछन्। फेरि मञ्चकाण्ड हुने त होइन। कस्तो मन्च बनाउँछन् हउ शहराँ नि हाम्रो घरतिर जस्तै गाम्लेका ८/१० वटा खाट जोड्ने रैछन् कि के हो?आफ्नो त स्कूल नजिकै घर,मन्च बनाउन लगेको खाट साटिएर हैरान हुन्थ्यो...